Indlela ukufaka mod Euro Truck Simulator 2, futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Okudume kakhulu isiqophi imidlalo zibangelwa lokusungula eyaziwa izinkampani ezinkulu software, engesiyo onyakeni wokuqala umsebenzi ofanayo. Sinenkosi abarhuweleli ezincane, abathatha ukuqaliswa umdlalo emakethe, futhi kuyinto ucezu umxhwele umsebenzi. Nokho, eminyakeni yamuva nje siye ngokuya ngiqale ukubona imiklamo indie, okuyinto akhiqizwa izinkampani ezizimele noma onjiniyela olulodwa. Lokhu kusho ukuthi inkampani yenzani ngokuphelele wonke umsebenzi wena - yohlamvu lokuqala ikhodi yomdlalo kuze kube seqophelweni, njengoba lizovela emashalofini. Ezinye zalezi amaphrojekthi ngempela azinake, ngoba bengeyona imidlalo kancane umxhwele enkulu. Isibonelo esiphelele game Euro Truck Simulator 2, okukunikeza ithuba lokuba wangempela umshayeli weloli, ukushayela azungeze wonke amazwe aseYurophu, ngokuletha ezihlukahlukene izinhlobo zezimpahla ngamaloli ezahlukene. Umdlalo nokobana umshayeli ukukhathala uhlelo (okungukuthi, kufanele ufune indawo ukuthatha isihlwathi, ukuze uqhubeke ngendlela), imoto refueling, imithetho yemigwaqo nokunye okuningi. Nokho, ngisho lo mdlalo emangalisayo ungakwazi ngcono, ezidayisa ke ukushintshwa. Kulesi sihloko sizofunda ngokuthi singakugwema kanjani ukufaka mod Euro Truck Simulator 2, okuguqula umdlalo wakho.
Kuyini imfashini ku ETS 2?
Uma kakade wazama iphrojekthi, futhi uyayithanda, ungakwazi ngcono. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ufunde indlela ukufaka mod Euro Truck Simulator 2. Kodwa kuyini na? Nale encane izengezo ungashintsha izakhi ezithile umdlalo. Ukulungiswa ezivezwa abadlala abanokuhlangenwe amakhono athile adingekayo ukuze ushintshe kwemigomo umdlalo. Ngakho, ungakwazi ukushintsha okuningi in the game - ukubukeka abahlanzi, ibalazwe GPS-Itilosi, nokunye. Ukushintshwa, ungakwazi ukwengeza umdlalo ezihlukahlukene amalebula ukuthuthukisa ukubukeka imoto yakho. Ngokuvamile, fashion kukunikeza ithuba enkulu ukuthi ungahlala ukusizakala. Into kuphela okufanele ukwenze - ufunde indlela ukufaka mod Euro Truck Simulator 2. Akunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala.
Njalo umdlalo wenziwa ilungiswe, kukhona ifolda ethile lapho kufanele agcinwe ukuthi ufinyelele kuzo kusukela umdlalo. Isinyathelo sokuqala ukuthi yini wena okudingeka uyenze ukuze ufunde indlela ukufaka mod Euro Truck Simulator 2 - kuyinto ukuthola ifolda. Kulokhu, konke silula - udinga ukuya "Imibhalo Zami" ifolda zonke singatholwa yinoma ubani kwi drive uhlelo. Lapho, uma usaqala ukuqala umdlalo kuzodala ifolda uzothola igama umdlalo. Ungene kulo. Ngaphakathi, uzothola namanye amafolda namafayela - khetha Mods ifolda. Kulapha futhi kuyoba imfashini yakho ukhetha ukuze ungeze Euro yakho Truck Simulator 2. Iklayenti umdlalo Indlela ukusetha imfashini? Iphinde akuthathi isikhathi sakho esiningi.
Ngakho, usuthathe isinqumo ukuthi udinga ngcono ukubukeka noma imingcele ethile e inguqulo yakho ye-Euro Truck Simulator 2. Indlela ukusetha imfashini? Kuba silula - udinga ukuqala ngokuthola kukho kwesokudla ku-intanethi. Uma uthola ukuthi yini babefuna - ukulanda amafayela kwikhompyutha yakho. amafayela Archived namafayela ngefomethi SCS - Kukhona izinketho ezimbili, okungase owethulwe ukuguqulwa umdlalo ukuphi. Uma une inketho lokuqala, uzodinga unzip ifayela - ngeke SCS ngamafayela isandiso, kanye halyards mhlawumbe ezengeziwe kwamanye izandiso, le likaNGIFUNDE-ifayela, nokunye. Kudingeka kuphela lezo le kuboniswe ngenhla ukunwetshwa lokuqala - ukopishe bese unamathisela wabayisa ifolda ukuthi uthole ngaphambili. Uma ungenayo i-archive, futhi ngokushesha SCS-ifayela, konke kuyoba lula kakhulu - udinga nje ukukopisha ifayela kufolda Mods - yilokho. Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungazibekela kanjani imigomo fashion for the game Euro Truck Simulator 2. It uhlala kuphela ukuqala umdlalo, kodwa lapha kukhona iphuzu elithile kubalulekile.
Running umdlalo nge Mods
Wena ukuqalisa umdlalo wakho, kodwa akwenzeki lutho ... Siyini isizathu? Iqiniso lokuthi imodi isethi akwanele - kumelwe isebenze. Ukuze wenze lokhu, ukhethe iphrofayli edingekayo bese ucindezela "Shintsha" - kuzovula iwindi ezengeziwe, lapho ungenza izinguquko umshayeli yakho, kanye izilungiselelo zakhe. Kube kukhona into "Kufakiwe imfashini", kukhona ngaphansi okuyinto uhlu Mods yakho - ukugqamisa labo ofuna kusebenze, bese uqinisekisa ushintsho. Uma ufuna ukufunda indlela ukufaka ikhadi Euro Truck Simulator 2, uzodinga ukwenza okufanayo: ukukopisha ezikhethiwe imicimbi amakhadi ifolda mod futhi ukuqala inselelo entsha!
Warface: indlela ungqongqoze deagle - izindlela ezine
Yekuchumana sendlela uzakubapha Unturned
Admin nethimba e "Rast" kanye nokusetshenziswa yabo
Njengoba e "DotA 2" ukubikezela ukunqoba - ukucabanga ngokuzwakalayo
Ubuncane nezidingo zomshini ku-PC Overwatch
Ikhekhe "Broken ingilazi" - iresiphi zakudala kanye ukuhluka ku ingqikithi
I-Ecumenism yiyiphi? Umlando we-Ecumenism
Ihhotela Senator Ihhotela 3 * Apartments (Cyprus, Ayia Napa): Uhlolojikelele, amakamelo kanye nokubuyekeza
Sangokushi Ihhotela Eks. Alinn Club 4 * (Turkey) - izithombe kanye nokubuyekeza
Uyini umthwalo wokuvuselelwa nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa?
Inani ihlathi lendoda wanamuhla. Izimbangela kwamahlathi